DLULA Yakovlev Yak-40 FSX & FSX-Steam - Rikoooo
Usayizi 250 MB
Play 17 292
Umbhali: Igor Suprunov (Design weSuprunov) FSX ukupakisha ngu-Andrey Vinogradov
Isengezo esingafani nekhwalithi emangalisayo kwincazelo ephezulu, thola i-Yakovlev Yak-40 kule nguqulo ye FSX futhi FSX-Steam, ukumbumbuluzwa kwendiza kukhulu kakhulu okwenza kube nzima kakhulu kuma-novices, ibhukwana linamakhasi we-123 (PDF) futhi azoba efakwe kwi-desktop yakho. Abanikeze asebenza nabo virtual (VC) is ngokugcwele abalingisa e HD nge 3D Izikali Russian.
Russian-add-on kuphela zingezinye zezibhedlela ezihamba ezikhona futhi akungenxa lutho, program Russian / modellers athande ngokoqobo nemininingwane, ukuze injabulo yethu.
Kubalulekile ukuba ufunde imibhalo ngaphambi kokuzama indiza (indiza njalo iqala izinjini off), Kanye Ngenhlanhla le imibhalo ngesiNgisi / Russian.
Lena pack ephelele nge siko umsindo, hD yokwehlela VC, inkambiso Izikali, manual, 14 repaints nokunye okuningi.
ISEXWAYISO SE-BUG, welulekwa ukuthi ngesikhathi sendiza uma ushintshela kwenye indiza FSX izoshayeka, ngakho-ke ngicela uqonde ukuthi uma usendizeni, awukwazi ukushintshela ngaphandle kokushayeka. Noma kunjalo, ikhwalithi yesengezo idlula ukuphazamiseka.
Repaint zazihlanganisa Aeroflot, Air Enterprise Bryansk, S7, KrasAir, UTAir, Life, Uzbek, Yamal, Yak Service, Sukhoi, Poland Air Force, Gazprom, eyayinabantu baseCzechoslovakia Airlines, Uzbekistan Airways.
I Yakovlev Yak-40 kuyinto encane ezintathu-engined kwesifunda ezokuthutha aircraft nomphakathi wamaSoviet kanye Russian Yakovlev. usuku Its yokuqala ukundiza 1966. It wathunywa ngo-September 1968 by Aeroflot.
ngesivinini esiphezulu: 550 km / h
Isisindo: 9400 kg
Ubude: 20 m
Ibanga passable 1 800 km
Namaphiko: 25 m
Unit Izindleko: 60 000 ukuba 210 000 USD
Uhambo lokuqala: October 21, 1966